Ahoana no hamafanaako na hanafoanana ny kaontiko Pinterest? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Ahoana no fomba hamafana na hanafoanana ny kaonty Pinterest-ko?
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 828
Ny ankamaroan'ny olona dia afaka mandalo fizotran'ny faniriana hamafa kaonty Pinterest na hamono azy io mihitsy aza mba hahazoana valiny tsara kokoa rehefa mahazo valiny tsara kokoa. Angamba olona maro no manontany tena hoe maninona no mety ny hevitra tsara hampiroborobo ny famonoana kaonty.
Ny fahafahana mamafa sy manafoana kaonty dia mety tsara ahafahan'ny olona misento amin'ny media sosialy na hanjavona noho ny fanelingelenana. Tsy isalasalana fa hevitra transendental ity mba hialana amin'ny vondrom-piarahamonina nomerika ary hamolavola hevitra tsara kokoa izay manome valiny mahavariana antsika.
Tsy azo atao ny maniry ny manamboatra ny toe-javatra rehetra misy amin'ny Internet ary mahatsapa ho reraka noho ny toe-tsaina ratsy ateraky ny olona. Na izany aza, azo atao tokoa ny amin'ny Pinterest dia manao ny mifanohitra amin'izany, fa miaraka amin'izay dia mila fotoana ny fijerinao ireo paingotra sy lahatsoratra mahaliana.
Antony tsy hanakanana ny Pinterest
Misy ny olona milaza fa mihoatra ny zavatra mety rehetra ny fitiavany tambajotra sosialy. Na izany aza, indraindray hevitra tsara dia ny afaka mijanona isan'andro isan'andro ary mijanona ho afaka amin'ny zava-mitranga eo amin'ny tontolon'ny nomerika.
Imbetsaka isika no manadino fa ny vanim-potoana niomerika dia izay, na dia manodidina ny 90% aza ny hetsika ankehitriny, tsara ihany koa ny mijery izay misy amin'ny tontolo tena izy. Mivoaha miresaka amin'ny namanao, manatanteraka asa mety hiteraka fanelingelenana ho an'ny mpampiasa, hampiroborobo ny tetikasa famoronana, sns.
Noho izany, etsy ambany no hahitanao ny antony mahatonga ny kaonty Pinterest tsy miasa na mamafa Amin'izao fotoana izao.
Tsy fahampian'ny fotoana
Indraindray isika dia mandray an'i Pinterest na pejy hafa ho toy ny sain'ny hevitra, ary raha ny tena izy dia mandeha ny androntsika sy ny fiainantsika ao anatin'ny lampihazo. Ny hevitra tsara dia ny maka aina ary mandray izay rehetra tsy mandeha tsara mandritra ny fotoana kasaina.
Hevitra tsy voalamina tsara
Matetika ny olona mino fa satria tsy mandeha araka ny kasaina ny hevitra dia tsara kokoa ny manandrana hatrany. Indraindray angamba hevitra tsara be io, nefa tsara ihany koa miala sasatra ary mieritrereta amin'ny loha milay inona no mitranga, noho izany dia azonao atao ny mamono vonjimaika ireo kaonty.
Raha jerena ireo antony voalaza etsy ambony ireo, ny hevitra tsara dia ny fanarahana ireo dingana izay hatsangana hahazoana vokatra tsara kokoa.
Tsy maintsy tsindrio ilay kisary teboka telo
Ilaina ny misafidy ny safidin'ny: "setting"
Fotoana hidirana amin'ny kaonty kaonty
Safidio ny kiheba: "deactivation de compte"
Amin'ny fotoana hanatanterahana ireo dingana ireo dia hangataka fanazavana momba ny antony fialan-tsasatrao ny sehatra. Azonao apetraka izay te hizara amin'ny pejy ianao.
Etsy ankilany, raha hamafa ilay kaonty voalaza dia mety hoe ao anaty ireo dingana voalaza etsy ambony ihany no anaovanao azy. Fa io fanapahan-kevitra io dia tena ilaina tokoa ary tsy maintsy raisina am-pitandremana.
1 Antony tsy hanakanana ny Pinterest
1.1 Tsy fahampian'ny fotoana
1.2 Hevitra tsy voalamina tsara
2 Ahoana no fomba hamafana na hanafoanana ny kaonty Pinterest-ko?
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny safidy "Video tiako" amin'ny YouTube?
Ahoana ny fomba hanaovana fikarohana amin'ny feo ao amin'ny YouTube?